आज विश्व अटिजम दिवस : के हाे अटिजम र कस्ता हुन्छन् यसका लक्षण ?Main Samachar
आज विश्व अटिजम दिवस : के हाे अटिजम र कस्ता हुन्छन् यसका लक्षण ?
२० चैत्र २०७७, शुक्रबार १४:५९ प्रकाशित
काठमाडाैं । आज विश्व अटिजम दिवस। विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमण गरेर यो दिवस मनाइदैँछ। अटिजम दिवस हरेक वर्षको अप्रिल २ मा मनाइन्छ।
अटिजमप्रति जागरुक गर्नका लागि यो दिवस मनाउने गरिन्छ। अटिजमलाई रोगको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ। तर यो रोग भने नभएको चिकित्सकहरु बताउँदै आएका छन्।
जानौँ अटिजम बारे, यसका लक्षण र उपचार।
अटिजम कुनै पनि बालबालिकालाई जन्मजात रुपमा हुने एक विशेष प्रकारको अपाङ्गता हो। यसलाई मस्तिष्क विकासको विकार ‘न्यूरो डेभलप्मेन्ट डिसअर्डर’ भनिन्छ। यसले मस्तिष्कको सामान्य कार्यहरुलाई प्रभावित पार्दछ।
अटिजम प्रायःजसो बच्चा जन्मेको तीन वर्ष भित्र प्रष्ट रुपमा देखिन्छ र जुन जीवनभर रहिरहन्छ। अटिजमका लक्षणहरु बालबालिका अनुसार फरक–फरक देखिन्छन्। तर मुख्य समस्याको रुपमा तीन वटा पक्षमा जटिल समस्याहरु देखिने गर्दछन्।
‘सञ्चारलाई बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाई, सामाजिक सिप बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाई र दोर्होयाएर गर्ने व्यवहारिक समस्या तथा सोच्न सक्ने क्षमतामा एकरुपता नहुनु’ यी समस्याहरु अन्य अपाङ्गतामा भने देखिँदैन।
यो अटिजमको विशेष प्रकार हो। अटिजमका लक्षणहरुहरु पनि व्यक्ति पिच्छे फरक–फरक हुने भएका कारण यसलाई ‘इस्पेक्ट्रम डिस्अडर’को रुपमा लिइन्छ।
अटिजम भएका व्यक्तिहरुलाई साधारण सञ्चार र सामाजिक कठिनाईदेखि लिएर जीवनयापनमा समेत अन्य व्यक्तिको सहायता आवश्यक पर्छ।
-आँखामा आँखा नजुधाउने,
-एक्लै बस्ने बानी,
-कुनै वस्तुसँग अनौठो लगाव,
-बोलाउदा नबोल्नुका साथै कहिलेकाहीँ नसुने जस्तो गरिदिने,
-असान्दर्भिक तरिकाले हाँस्ने,
-अरु केटाकेटीसँग नखेल्ने तथा घुलिमल नहुने,
-कुनै काम राम्रोसँग गर्न सक्ने तर सामाजिक काम गर्न नसक्ने,
-शब्द तथा वाक्यांश दोहो¥याउने,
-कुनै पनि वस्तु घुमाइरहने,
-अत्याधिक चकचके वा अति निस्क्रिय हुने,
-बिना कारण रुने, कराउने वा चिन्तित हुने,
-सामान्य शिक्षण विधीबाट नसिक्ने,
-घाउ, चोट अथवा दुखाई प्रति कुनै वास्ता नगर्ने,
-कहिलेकाहिँ अरुले छोएको वा अँगालो हालेको मन नपराउँने,
-असामान्य व्यवहार जस्तैः हल्लिने, मच्चिने, हात हल्लाउने, उफ्रिने
अटिजम के कारणले हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म पनि ठोस रुपमा पत्ता लाग्न सकेको छैन। त्यसकारण पनि हुन सक्छ, विश्वमै अटिजमको उपचार सम्भाव्यता शून्य नै रहेको चिकित्सकहरुले बताउने गरेका छन्।
उपचार सम्भव नभएता पनि सानै उमेरमा पत्ता लगाउन सकिएमा व्यवहारिक रुपमा व्यायम, थेरापीद्वारा यसलाई केही हदसम्म रोकथाम गर्न सकिने शिक्षण अस्पतालकी बालरोग विषेशज्ञ डा. मेरिना श्रेष्ठ बताउँछिन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङक अनुसार विश्वमा जन्मिने ६८ जना बालबालिका मध्ये १ जनालाई अटिजम भएको पाइएको छ। तर नेपालमा अटिजम भएका बालबालिका सम्बन्धी कुनै यकिन तथ्याङ्क नभए पनि करिव ३ लाख भन्दा बढिलाई अटिजम भएको अनुमान गरिएको छ।
यस्तै डा. श्रेष्ठले प्रत्येक दिन एक जना अटिजम भएको बच्चा उपचारको डाइग्नोसिसको लागि अस्पताल पुग्ने गरेको बताउँछिन्।